Medical Writings ဆေးပညာစာများ: “အရေးပေါ်လူနာတွေရှိသည်”
မုံရွာဝန်းကျင်က ဆရာဝန်များခင်ဗျာ။ တတ်စွမ်းသ၍ သေနတ်ဒဏ်ရာရပြီး ဆေးကုသခွင့်မရသူတွေကို ဝိုင်းကူပေးကြပါခင်ဗျာ။ အနူးအညွတ်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
ဆရာ ဒီနေ့ည လက်ပတောင်းမှာ ရဲခြောက်ယောက် ပြည်သူတွေဝိုင်းရိုက်တာခံရတယ်။ အခု ဆေးရုံရောက်နေတယ်။ ရဲတွေ ည ၉ နာရီကျော်လောက်ထင်တယ် ဆေးရုံရဲတွေရောက်တော့ ၁၀ နာရီ ကျော်ပြီ။ သတင်းတော့ အကြ မသိရသေးဘူး။ ဆေးရုံမှာပြောကြားသံတွေပါ။ ရဲတွေတော့ တော်တော်နာတယ်။
ဟုတ်လား။ ဘယ်ကမှ မကြားမိသေးဘူး။
"လက်ပံတောင်းတောင်မှာ ၁၄. ၁၁. ၂၀၁၃ ည ၈း၃၀နာရီဝန်းကျင် ရဲနဲ့ဒေသခံတွေ ပဋိပက္ခဖြစ်ပြီး ထိခိုက်မှုတွေ ရှိခဲ့ကြတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ ရဲ (၉)ဦး မုံရွာဆေးရုံကြီးကိုရောက်ရှိကုသနိုင်ခဲ့ပေမယ့် သေနတ်မှန်တဲ့ဒေသခံတွေက ကုသခွင့်မရသေးတာက လုံးဝကိုမတရားတဲ့ အဖြစ်ပါ။ တာဝန်ရှိတဲ့အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ သေနတ်မှန်တဲ့ဒေသခံတွေကို အမြန်ဆုံးကုသပေးဖို့ တိုက်တွန်းတောင်းဆိုပါတယ်။
ဆရာ ရွာသားတွေ သေနတ်မှန်တာ ဆေးထွကိမကုရဲဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အကြံပေးပါအုံး။
အေးဗျ၊ အခုဘဲ မှတ်ကြီးကလဲ လှမ်းပြောတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ဘယ်လိုမှ မတတ်သာသေးဘူး။ သိတဲ့ဆရာဝန်တွေ လှမ်းပြောကြည့်အုံးမယ်။
နံနက် ဝ နာရီ၊ ၂ဝ မိနစ် ၁၅-၁၁-၂ဝ၁၃